နာနတ် nanas<span title="Some source stated that word come from French or German ananas." style="white-space: nowrap;">[ကိုးကားချက်လိုသည်] C
↑ ဦးဖေမောင်တင် (၁၉၇၄၊ ဒုတိယ အကြိမ်။). ယိုးဒယားပြည်မှ ရရှိသော ယဉ်ကျေးမှုများ, နဝရတ် ကိုးသွယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုစာဆောင်၊ အတွဲ၄၊ အမှတ်၂၊ ၁၉၆၃ခု။. စပယ်ဦးစာပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မွေးစားစကားလုံးများ&oldid=409370" မှ ရယူရန်